Faransiiska: Yurub uma baahna talooyinka Trump - Worldnews.com
Madaxweynaha dalka Faransiiska, Francois Hollande, ayaa ku gacanseyray hadal ka soo yearay Donald Trump oo dhaliil u soo jeediyay siyaasadaha dalka Jarmalka ee ku aadan soogalootiga.
"Yurub uma baahno in talooyin laga siiyo qaabka ay howlaheeda u maareyneyso, ayuu yiri Mr Hollande.
Mr Trump ayaa ku eedeeyay
Madaxweynaha dalka Faransiiska, Francois Hollande, ayaa ku gacanseyray hadal ka soo yearay Donald Trump oo dhaliil u soo jeediyay siyaasadaha dalka Jarmalka ee ku aadan...
Trump: Aniga iyo Merkel waa nala basaasay
Madaxweyne Trump ayaa markale ku celiyay eedeyntiisa ah in maamulkii Obama uu basaasi jiray. Mar ay xalay asaga iyo hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, si wadajir ah shir...
Madaxweyne Obama ayaa waxa uu taleefanka kula hadlay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, si uu uga mahadceliyo waxa uu ugu yeeray hogaaminteeda ku aadan la tacaalidda...
Madaxweyne Obama ayaa waxa uu taleefanka kula hadlay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, si uu uga mahadceliyo waxa uu ugu yeeray hogaaminteeda ku aadan la tacaalidda dhibaatada soogalootiga ee Yurub. Aqalka Cad ee Mareykanka ayaa sheegay in...
Shirka sanadlaha ah ee looga hadlo ammaanka ayaa maanta gelinka dambe ka furmi doona magaalada Munich ee waddanka Jarmalka, waana shirka ugu ballaaran ee noociisa dunida ka dhaco. Hogaamiyayaal, wasiir heer sare ah iyo dadka siyaasadaha dajiyo ayaa waxa ay isla qaadaa dhigi doonaan dhibaatada ka taagan waddanka Suuriya, heerka xiriirka Gaashaanbuurta NATO iyo Ruushka, iyo...
Mareykanka oo "shaki la\_'aan" taageeraya NATO, ayuu yiri Pence
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, Mike Pence oo ka qeybgalaya kullanka amniga ee Munich ayaa sheegay in Ruushka lala xisaabtamayo. Wuxuu tilmaamay in xukuumadda Moscow lagula xisaabtamo ficilkeeda bariga Ukraine iyo goosashada Crimea. Khudbadii ugu horeeysay ee dibadda dalka Mareykanka uu ka jeediyo, Mr Pence wuxuu digniin ugu diray Ruushka. Wuxuu u sheegay maamulka Putin inuu...
In kabadan 200 oo muhaaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen doon ku dagtay xeebaha badda Liibiya, sida ay sheegtay hay'ad gargaar oo Spain laga leeyahay. Hay'adda Proactiva Open Arms oo ka shaqaysa samato bixinta dadka badaha ku safra ayaa heshay 5 mayd oo sabaynaya meel aan ka fogayn labo doomood oo dagay kuwaas mid kaste ay qaadi karto ilaa 100 ruux. Laura...
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka sergei Lavrov oo ka hadlay shirka amniga ee Munich ayaa beeniyay eedo loo jeediyay oo ah inay nabadda curyaaminayaan. Dalalka reer galbeedka ayuu ku eedeeyay inay weli niyadda ku hayaan dagaalkii qaboobaa. Wuxuu sheegayaa inay isku deyayaan inay isku ballaariyaan dhanka bariga Yurub. Halkaas ayaa imaanaya ka dib markii, madaxweyne ku...